Mere Influencer Marketing Nwere Ike Bebụ Nzọụkwụ Gị Ọzọ | Martech Zone
Bọchị Sọnde, Machị 29, 2015 Thursday, June 18, 2015 Douglas Karr
Mgbe m kwuru okwu na ahịa ahịa na Social Media Marketing World, enwere m obi ụtọ site na ọchịchọ na mkparịta ụka na-aga n'ihu nke mụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enwe na ogbako ahụ. Enwere m ọnụ ụlọ juru n'ọnụ ma nwee ọnụ ọgụgụ mmadụ na-eso m pụọ na nkwupụta maka ụfọdụ ajụjụ ndị ọzọ mgbe nnọkọ ahụ gasịrị.
M na-akọrọ ndị vidiyo vidiyo nke Rappitt emere m - nke ruru ndị na - ege ntị sara mbara ugbu a na-enweghị mkpa iji kwụọ m ụgwọ dịka onye nwere mmetụta n'ihi na ọ lekwasịrị m anya wee mee m vidiyo ahụ. Ekwuru m banyere akụkọ na-emepe emepe na usoro iji hụ na ihe ịga nke ọma na onye na-emetụta ya ma nwee ọpụpụ mgbe ha anaghị arụ ọrụ. Enwetara m ụfọdụ nzaghachi na ịkọ akụkọ nke ga - enyere ndị na - eme ihe ike ikwupụta ozi banyere ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ịchọrọ ka ha kesaa.
Dị dị ka luzụ ahịa Mgbasa n'ihi na ọ nwere ike ijere ọtụtụ ebumnuche (na mgbakwunye na ebumnuche kachasị pụta, na-abawanye ahịa): ọkwa peeji, ikpughe, iguzosi ike n'ihe ndị ahịa, ọgbọ UGC, uto na ntanetị mmekọrịta, ịrịa ọrịa ọdịnaya, na ndị ọzọ. Ndị ahịa na-amasị ya n'ihi na ọ na-abịa dị ka ezigbo. A NA-AKPATA HA ya n’oge kwesịrị ekwesị. Mgbe a n'ji na-eme nchọgharị na blog banyere home-ndozi… nke ahụ bụ zuru okè oge na-ewetara ha a njikọ na Eames oche (na gị ika a na-egosi ugbu a), na ya gosiri n'ime onodu nke a tụkwasịrị obi influencer n'ụlọ. Usoro a gbara ọkpụrụkpụ dị irè karịa iziga ha ozi email spammy nke ụtụtụ… mgbe ha na-arụ ọrụ.
Isi ihe dị mkpa maka ịchọta onye na-emetụta ihe abụghị ihe mgbagwoju anya na iru ma ọ bụ ewu ewu. Nnukwu ihe na-esote apụtaghị na ndị na-ege ntị ma ọ bụ obodo ga-enubata ịzụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị. N'ezie, ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị a na-akpọ influencers nwere nnukwu ewu ewu - nke ahụ apụtaghị na ha nwere ike imetụta omume ịzụ ndị na-eso ha.
Ọ dị oke mkpa na ịchọta onye nwere ndị na - ege ya ntị nwere ikike ị bụghị ịkwalite ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị naanị - kama ịrata ndị na - eso ụzọ ma duru ha gaa azụmaahịa gị ebe ị nwere ike ịgbanwe ha. Mmetụta adịghị ere, okwu mmetụta na-esite n'okwu ahụ pụta igba. Ọrụ nke influencer bụ iduzi usoro ahụ ka ị wee nwee ike iji ntụkwasị obi na ikike nke onye nrụpụta ahụ wulitela ma tinye ya dị ka nke gị.
Adịghị adị mepụtara ihe omuma a ma obu ihe nlere ahia di iche iche iji mata ma jikoo ya na ndi choputara ma tụọ ihe ịga nke ọma nke mkpọsa ndị a na-egbu.
Tags: ahịa ahịammetụta ahịa ahịaadị